बोलीले मात्र परिवर्तन असम्भव - Ratopati
- | धर्मिन्द्रा शाह
हामी जोकोहीलाई टिप्पणी गर्न सहज छ । राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि । यस्तो भइरहन्छ, यस्तै यस्ताकोे शृङ्खला चलिरहने हो भने राजनीति एउटा दूषित खेल हो भनेर प्रष्ट हुन्छ । असल मानिस राजनीतिमा जान निरुत्साहित हुन्छन् र खराबबाट शासित हुन बाध्य हुनुपर्छ ।
गरिब तथा निम्न वर्गका जनताको दुःख कहिल्यै हट्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने यो कथन सर्वसत्य पनि होइन । खराब प्रवृत्तिलाई हटाउने सम्बन्धमा राम्रा व्यक्तिहरुबाट निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । विस्तारै राजनीतिमा आएको परिर्वतन खुलापन, पारदर्शिता, लोकतन्त्रको आगमन यसैको नतिजा हो ।
राणाहरूको एकलौटी शासनबाट दिक्क भएर २००७ सालको जनक्रान्ति भयो । देशलाई राजाहरूको हैकमबाट मुक्त गर्न नेपाली जनताले वि.सं २०४६ को जनआन्दोलन गरे । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनको वेगमा नयाँ व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । त्यसै क्रममा वि.सं. २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले नै बारम्बार जनताका अधिकारमाथि थिचोमिचो गर्ने राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य भयो । त्यसको लगतै देशमा गणतन्त्रको आगमन भयो ।
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाले केही राम्रो हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ । तर देशमा यस्ता आशालाई धमिलो बनाइएको छ । यसका गतिला उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै पहिलेका इतिहासका पाना पल्टाउनै पर्दैन । पहिले संविधान सभाको विगठन र दोस्रो संविधान सभाको माघ ८ लाई हेरे हुन्छ । त्यसैले भन्न मन छ, राजनीतिज्ञज्यूहरू यसबारे खोई त राजनीतिक बहस ?
राजनीति गर्नेहरुले अब सजग बन्नुपर्छ । किनभने गणतन्त्रको उदयसँगै जनजीवनमा आफ्ना आकांक्षाहरूको परिपूर्ति चाहने क्रियाशील पुस्ताको पनि आगमन भएको छ । अब विस्तारै सिद्धान्तका बन्धन खुकुलिँदै गएका छन् । कुरा मात्र नयाँ तर व्यवहार उही पुरानै भएसम्म जनताले चाहेको परिर्वतन सम्मभव छैन । यसले त आम जनताको हैन केवल सीमित वर्ग र सीमित व्यक्तिले लाभ लिइरहेको देखिन्छ ।
बदलिँदो समाज काम कम र भाषण मात्र बढी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य चाहान्छ ।
एकअर्काको टीकाटिप्णीमा समय बिताउनुभन्दा पनि समाज परिर्वतनको सपना देख्नु कैयौं गुणा राम्रो हो । तर जबसम्म हाम्रो समाजमा धनको अगाडि सत्यको हार भइरहन्छ तबसम्म समाज परिर्वतन सम्भव छैन । जुन देशमा कानुन निरिह भइरहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेपमा अपराधले संरक्षण पाइरहन्छ । अनि धनको आडमा असत्यले विजय हासिल गरिरहन्छ । त्यहाँ पर्वितनले सहजै फड्को मार्न सक्दैन । जबसम्म अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाइरहन्छ तबसम्म समाज परिर्वतनका तथा समाज विकासका सपना विपना परिणनत अधुरै रहने छन् ।
पहिलेको अनुपातमा अहिले जनता सचेत बनिसकेका छन् । आश्वासनले मात्र परिर्वतन हुँदैन भनेर सबै जनता सजग बन्दै गएका छन् । यतिबेला देश दुनियाँ ढाँटी खाने फितला नेता होइन, समाज परिर्वतनको निम्ति काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमतावान् नेतृत्वको खोजीमा छन् ।
त्यसैले कुनै पनि दल वा दलका नेतृत्वले कसले कसलाई उछिन्ने दौडले मात्र सफलता हुन सक्ला र ? सफलता प्राप्त गर्न त अब गठबन्धनलाई अरु मजबुत बनाएर संविधान लागू गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने पछिल्ला घटना मात्र होइन, अघिल्ला घटनाहरु लुकाएर लुक्दैन, ढाँटेर छुप्दैन, हेक्का रहोस्, देश र जनता राजनीतिक गतिविधिसँग राम्ररी परिचित छन् ।